Mutungamiri weAmerica, VaBiden, Vokurudzira Mhuri yeAmerica Kushanda Pamwe Navo Mukurwisana neCovid-19
Mutungamiri weAmerica, VaJoe Biden.
Mutungamiri weAmerica, VaJoe Biden vakurudzira mhuri yeAmerica kuti ibatane navo mukurwisana nedenda reCovid-19 vachiti pasvika America mukurwisana kwayo neCovid-19 hapachakwanisi kudzokera kumashure.
VaBiden, avo vati vanogara nebepa muhomwe mavo rinoratidza huwandu hwevanhu vemuAmerica vari kufa neCovid-19 zuva nezuva, vati haisisiri nguva yekurega kushandisa zvekuvhara muromo nemhuno, kana kuti ‘mask’, kugeza maoko kana kurega kubaiwa nhomba.
Vakumbira kuti vanhu vavabatsire mukurwisana neCovid-19, vachiti havangazviiti vari voga, vachiti veruzhinji vangabatsira zvikuru kana vakaita zvose zvavanoudzwa navanachiremba.
"Ndinovimbisa kuti ndichaita zvose zvandinogona. Handisi kudzokera shure, asi ndinoda kuve nemi vanhu vemuAmerica, ndinokudai. Ndinoda kuti chizvarwa chose cheAmerica chiite pacho.
"Ndinoda kuti mubaiwe nhomba kana nguva yenyu yasvika kana mawana mukana kuitira kuti mubatsire mhuri dzenyu, shamwari dzenyu, vavakidzani venyu, kuti vabaiwewo nhomba.
"Nekuti chinangwa ndechichi, kana takaita zvose izvi pamwechete, panosvika Chikumi 04 pane mukana wakanaka wekuti imi nehama dzenyu neshamwari dzenyu munenge mave kukwanisa kusangana mudzimba dzenyu kana mamunogara muchiita mabiko ekupemberera zuva rekuzvitonga," Vadaro VaBiden.
Vati hapana rukudzo runopfuura kuvimbiwa navo pakuchengetedza hutano nehupenyu hwevanhu vemuAmerica.
Mutungamiri wenyika vaudzawo vanhu kuti Covid-19 inofanirwa kukundwa kuti zvinhu zvidzokere pazvakange zviri. Vati kubva musi wa 01 Chivabvu vanhu vakuru vose muAmerica vanogona kunyoresa kubaiwa nhomba sezvo hurumende iri kutenga mishonga yenhomba inokwanira vanhu vose.
"Ndiri kuzivisa kuti ndichaita kuti matunhu ose aite hurongwa hwekuti munhu wese ane makore gumi nemasere zvichikwira anokodzera kubaiwa nhomba ange agadzirira kubaiwa nhomba panosvika Chivabvu 01.
"Regai ndidzokorore zvakare. Vese zvizvarwa zveAmerica vakura vanofanirwa kunge vagadzirira kuwana nhomba panosvika Chivabvu 01, kudarika nguva yanga ichitarisirwa. Regai ndijekese zvakare. Hazvirevi kuti munhu wese achabaiwa.
"Asi kuti unenge wave kukwanisa kuwana mukana. Kubva Chivabvu 01 munhu wese akura anenge ave kukwanisa kubaiwa nhomba. Kuti izvi zviitike, tichange tave kubva panhomba miriyoni imwechete dzandakavimbisa dzisati dzatora mhiko muna Zvita, kuenda pamamiriyoni maviri pazuva."
VaBiden varumbidzavo bhiri ravakasaina nemusi weChina, rinonzi ‘American Rescue Plan’, iro richashandisa mari inoita matiririyoni maviri emadhora eku America kuti imutsidzire makambani nemabhizimisi akavhiringwa neCovid-19, pamwe chete nekubatsira zvikoro nematunhu.
Vanodzidzisa zvematongerwo enyika paWellesley College, kuMassachusetts, Muzvinafundo Chipo Dendere, vanoti VaBiden vataura zvakanaka pamusoro pekurwisana neCovid-19, vachiti kukumbira rubatsiro kubva kuvanhu kwavaita zvaratidza kuti Covid-19 ihondo yevanhu vose.
Vanoti kuzvininipisa mukutaura kwavaita nevanhu kuchaita kuti vazhinji vateerere nekuita zvizhinji zvavari kukurudzira vanhu kuti vaite.
Muzvinafundo Dendere vanoti bhiri raVaBiden rekubatsira vanhu chinhu chikuru chichataurwa kwemakore mazhinji ari kuuya sezvo richibata munhu wese, makambani nemabhizimisi muAmerica.
Hurukuro naProfessor Chipo Dendere